तपाईंको नाम ?'
'..........(उनले गोप्य राख्न चाहिन्)
'घर नि ?'
'उमेर कति भयो ?'
'कसरी लागूऔषधको लतमा फस्नु भो ?'
पछिल्लो प्रश्नको उत्तरमा केहीबेर रोकिइन् र आफ्नो कथा यसरी सुनाइन्-'होस्टलमा बस्दा घरको साह्रै याद आउँथ्यो। असाध्यै एक्लोपना महसुस हुन्थ्यो। मन बेचैन भएपछि ट्वाइलेटमा छिरेर चुरोट तान्थें।
कलेजमा मेरो सुख-दुख साट्ने साथीहरू थिएनन्। कारण, पढाइमा कमजोर थिएँ, जसले गर्दा शिक्षक र पढन्ते साथीहरूबाट सधैं अपहेलित हुनुपथ्र्यो। यही क्रममा यस्तो साथीहरूको सर्कलमा मिसिए, जो बिन्दास मस्ती गर्न चाहन्थे। कतिसम्म भने, त्यसमध्येको एउटा केटी त ग्रुप सेक्समा समेत रमाउने खालकी थिइन्। उनीहरूको सर्कलमा म आफूलाई स्वतन्त्र र खुला ठान्थें। त्यही संगतमा पहिलो पटक गाँजा तानें।
यसको नसामा डुबेपछि कुनै डर, चिन्ता, बेचैनी हुँदैनथ्यो। तर, यससँगै मलाई 'भित्ति', 'ट्यापे' जस्ता नामले सम्बोधन गर्न थालियो। बाहिर हिँड्दा सबैले एकोहोरिएर हेरेजस्तै लाग्थ्यो। त्यसैले कोठाभित्रै वा आफ्नै सर्कलका साथीसँग मात्र बस्न थालें।
गाँजामा बानी परेपछि त्योभन्दा नसालु चिजको तलतल लाग्दो रहेछ। त्यही क्रममा मैले विस्तारै लागूऔषधको प्रयोग गर्न थालें। यसको नसा लागेपछि घर-परिवार, जिम्मेवारी, क्यारियर केहीको मतलब हुन्न। त्यसैले होला परिवारले पनि खासै वास्ता गर्न छाडिसके। सबैले हेला गर्छन्। किनकी म बिग्रिएकी केटी हुँ।'
यी किशोरी जस्तै थुप्रै लागूऔषधका प्रयोगकर्ता हिनताबोधले ग्रस्त छन्। उनीहरू स्वयम् आफूलाई 'बिग्रिएको' ठान्छन्। त्यसैले यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरामा उनीहरू खासै चासो दिँदैनन्। यो एउटा मानसिक समस्यका रूपमा देखिएको मनोविज्ञ करुणा कुँवर बताउँछिन्।
'लागूऔषधको दुव्र्यसन हुँदैमा सम्पूर्ण रूपमा वर्वाद भइदैन' कुँवर भन्छिन्- 'यो उनीहरूको कमजोर मानसिकता मात्र हो।' दह्रो आत्माविश्वास हुने हो भने लागूऔषध दुव्र्यसनबाट सहजै छुटकारा पाउन सक्छन्। यसका लागि प्रयोगकर्ताले 'दुव्र्यसनीमा फस्दिन' भनेर प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक हुने उनले बताइन्।
समाजमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइन्छ, जसले लागूऔषधको दुव्र्यसन छाडेर नयाँ जीवन प्रारम्भ गरेका छन्। हामीले हेर्ने हिन्दी सिनेमाकै कतिपय नायक/नायिका विगतमा दुव्र्यसनी भएको समाचार भर्खरै बाहिर आएको छ। अहिलेका सुपरहिट अभिनेता रणवीर कपुरमा पनि लागूऔषधको लत थियो भनिन्छ। अहिले उनी यस किसिमको दुव्र्यसनबाट मुक्त मात्र छैनन्, बलिउडकै सर्वाधिक संभावना बोकेको नायकका रूपमा देखा परेका छन्। हाम्रै समाजमा पनि लागूऔषधको दुव्र्यसन छाडेर घर-परिवार सम्हाल्नेदेखि राम्रो काम गर्न अग्रसर हुनेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्।
त्यसो त कोही पनि 'दुव्र्यसनी बन्छु' भनेर नियोजित रूपमा लागेका हुँदैनन्। सामान्यतः चुरोटबाट सुरु भएको लत गाँजा, चरेस हुँदै अफिम, हिरोइन जस्ता महँगा र हानिकारक लागूऔषधसम्म पुग्ने मनोविद् कुँवरको विश्लेषण छ।
कुनै पनि नसालु पदार्थको सोझो असर हाम्रो मस्तिष्कमा पर्छ। त्यसैले नसा लिइसकेपछि 'सबै किसिमका तनाव हटेजस्तै' भान पर्छ। तर, यस किसिमको आनन्द क्षणिक मात्र हो। 'नसाले छोडेपछि पुनः छटपटी सुरु भैहाल्छ' कुँवर भन्छिन्-'त्यसैले एकछिनको आनन्दका लागि लागूऔषध लिनुभन्दा त्यसबाट छुटेर जीवनभर रमाउन सक्नुनै उत्तम हो।'
लागूऔषधको प्रयोगकर्तालाई विभिन्न रोगले च्याप्ने सम्भावना वढी रहन्छ। नसाको निम्ति दुईभन्दा बढीले सुई साटासाट गरेर प्रयोग गर्ने, असुरक्षित यौनसम्बन्ध राख्ने क्रममा एचआईभी, हेपटाइटिस सीजस्ता संक्रमण सर्न सक्छ।
यता लागूऔषध प्रयोग गर्ने केटीहरूसँग सहजै ड्रग्स उपलब्ध गराउने च्यानल नहुने र त्यसका लागि केटामा निर्भर हुनुपरेको छ। कुँवर भन्छिन्- 'र, यही मौकाको फाइदा उठाउँदै उनीहरूमाथि यौन शोषण हुने गरेको छ।' अतः असुरक्षित ढंगले गरिएको यौन व्यवहारले संक्रमित रोगको जोखिमलाई थप बल पुर्‍याउँछ। अनिच्छित गर्भधारण, एचआईभी संक्रमण यसैको नतिजा हुन्।
लागूऔषधको कुलतबाट छुटकारा पाउनका लागि 'आत्माविश्वास र प्रतिबद्ध' मन चाहिन्छ। त्यसपछि मनोवैज्ञानिक परामर्श र सामाजिक सद्व्यवहार भयो भने उनीहरू सजिलै यसबाट मुक्त हुन्छन्। यदि यो सम्भव नभए अरू विकल्प छन्। जस्तो, मेथाडोन कार्यक्रम।
लागूऔषधका बानी परेकाहरूलाई क्रमशः यसबाट छुटकारा दिलाउनका लागि सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मेथाडोनको प्रयोग गरेर लागूऔषध प्रयोगको मात्रा क्रमशः कम गर्दै लान सकिन्छ। यसको खास फाइदा भनेको लागूऔषधकै रूपमा लिए पनि मेथाडोनले मानसिक तथा शारीरिक रूपमा हानी गर्दैैन। र, अर्कोचाहिँ यसका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्दैन, निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मेथाडोनको प्रयोगले लागूऔषधको खपत त घटाउँछ नै, संक्रमित रोगको जोखिम पनि कम गर्छ। लागूऔषधका दुव्र्यसनीलाई लक्षित गर्दै अहिले सेभ द चिल्ड्रेनअन्तर्गत सामाजिक केयर युनिटले छुट्टै अभियान थालेको छ। यसले काठमाडौं, नेपालगन्ज, पोखरा, विराटनगर, कपिलवस्तुजस्ता स्थानमा आफ्नो अभियान सञ्चालन प्रारम्भ गरेको हो।
हेपटाइटिस-सी र उपचार विधि
लागूऔषधको प्रयोगकर्तालाई हेपटाइटिस-सीको संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यसको शंका लागेमा 'एच.सी.भी. एन्टीवडी' परीक्षण गराउनुपर्छ। यसबाट हेपटाइटिस-सी भएको वा नभएको थाहा पाउन सकिन्छ। यो रोग निदानका लागि एचसीभी उपचार अपनाउनुपर्छ। भाइरस हटाउन, कलेजो सुन्निएको कम गर्न, संक्रमण सर्ने जोखिम टार्न, क्यान्सरजस्ता रोगको जोखिमबाट बँच्न यो विधि उपयुक्त हुन्छ। रोग लागे पनि धेरैजसो व्यक्ति लामो समय बाँच्न सक्छ। खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नाले कलेजोलाई काम गर्न धेरै सहयोग गर्छ । यसका लागि नियमित व्यायम, ताजा फलफूल तथा पर्याप्त पानीको सेवन गर्नुपर्छ।